AMAJAPAN AFUNXA IITUBHU (IINGCAMANGO ZOYILO) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela AmaJapan afunxa iitubhu (Iingcamango zoyilo)
Apha sabelana ngeebhafu zokuntywila zaseJapan kubandakanya i-Ofuro, encinci, ishawa, ukhuni, ubhedu, iibhafu ezingenasinxibo kunye nezangaphandle.
I-Ofuro, okanye iibhabhu zokuntywila zaseJapan ngokwenene bubugcisa bokuhlamba. EJapan, ezi zitya zizinto zobuchwephesha ezimangalisayo. Kukho ipaneli yokulawula eya kubazalisa ngokuzenzekelayo kubushushu obucwangcisiweyo kwaye ujikeleze amanzi ukuze uwagcine efudumele kude kube kuhlambe usapho lonke. Uyahlamba phambi kokuba uthambe ukuze ungangcolisi amanzi.
Kwiimodeli ezintsha kukwakhiwa kwiitv's ezinee-remote control controls. Amanzi eza ngqo emaphethelweni kwaye wonke umzimba wakho untywiliselwe, ukuphuphuma ayongxaki kuba igumbi liphela ligumbi elimanzi. Iityhubhu zihlala zenziwe ngeplastikhi etyhidiweyo okanye iglasi yefayibha kwaye azikhaphukhaphu kwaye zibekwe kwizivalo ngenxa yenyikima rhoqo. Igumbi lokuhlambela laseJapan liyamangalisa.
Ngasentshonalanga, asikwazi ukufumana amava apheleleyo e-Ofuro, kodwa sinokufumana amaJapan afake iibhubhu ngobukhulu kunye nezitayile. Eyona nto ibalulekileyo kule tub, ewe, bubungakanani. Inzulu kunokuba ibe nde, ikuvumela ukuba uhlale ebhafini, ngamanzi ekugubungele yonke indlela ukuya emagxeni akho. Zifumaneka ngamatye, ukhuni, ifayibha, kunye nobhedu kwaye zinokuhla ngexabiso ukusuka kwi- $ 600 ukuya kwi-5000 yeedola.
(Jonga le bhafu yase-Ofuro yaseJapan IAmazon )
Ngamava okwenyani afana ne-onsen, umphezulu webhafu yakho yokufaka kufuneka ubekwinqanaba lomhlaba, ke wehle ungene kuwo. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka umbe emhlabeni kwaye uyilungiselele ityhubhu okanye kuya kufuneka wakhe umgangatho phezulu kuyo, ukuze yonke into ikwinqanaba elifanayo. Ngokufanelekileyo ubuya kuba nentloko yeshawari efakwe ecaleni kwebhafu kunye nesitulo esincinci onokuhlala kuso ngelixa uzihlamba kwishawa ngaphambi kokuba uhlambe.
Le bhafu yesiko eyenziwe ngamatye ijikelezwe lilitye lomlambo elinika igumbi lokuhlambela indawo yokuphumla enjenge-spa.
(Jonga le ndlela yaseJapan ifunxa ibhafu eWayfair)
Izinto zakho eziphambili kufuneka zibe ngamaplanga, iithayile zekheram, kunye nesinyithi esigqityiweyo sesinyithi sakho sokuhlambela kunye nesixhobo sokuhlambela. Isitya esincinci esinokugcwaliswa ngamanzi abandayo sihlala sibekwa ecaleni kwebhafu. Ufaka ilaphu elincinci kwisitya samanzi kwaye usibeke ngasemva kwentamo yakho okanye entlokweni yakho ukuze ungafudumali ngelixa ucwina emanzini ashushu. Olu luhlengahlengiso olukhulu okanye ukwakha, kodwa amava okuhlamba kufanelekile.
utshintsha njani igama emva kokutshata
(Isitya setafile sobhedu saseJapan)
Ukuba ufuna i-tub yamava kodwa ufuna ukugcina inkcubeko yaseMelika ngakumbi, ungaya nge-fiberglass ejikelezileyo, ubhedu, intsimbi engenasici, okanye ityhubhu yokufaka iinkuni. Bahlala benendawo engqonge indlu okanye ujonge izinyuko ezikhokelela kuzo ukuze zifikeleleke lula. Olu luhlobo lwebhafu oza kuhlala kulo, olunzulu, kunokuba lide. Yongeza ibhasikithi yeetawuli kwindawo engqonge ukufikelela ngokulula xa uphuma ebhafini kwaye ugcine ibhasikithi encinci yeetyuwa zokuthambisa ukuze uphumle ngakumbi ngelixa uhlamba. Amakhandlela ambalwa anevumba elithozamisayo aya kongeza i-ambiance kunye nokuphumla okungaphezulu ngohlobo lwe-aromatherapy.
Unokuntywila ibhafu yakho ngokuyinxenye kwaye uyihambise ngamatye omlambo ukufihla amadreyini amkela ukugcwala. Iibhafu ezenziwe ngesiqhelo zinokuba nezihlalo ezikhutshwayo, ishelufu ehamba ngaphezulu kwebhafu ukubamba iglasi yewayini, kunye neziciko eziya kugcina amanzi akho eshushu ngelixa ulungiselela ukuhlamba kwakho.
Iityubhu ezenziwe ngomthi weHinoki ziya kukhupha ivumba elithandekayo xa zigcwele amanzi ashushu, abilayo, ukongeza ukuphumla okuza nokuzisa. Kukwakho nesiko lokuthambisa abenzi betyhubhu abaza kukrola ibhafu yakho yokuntywila kwilitye eliqinileyo. Kukulungele ukusebenza nomzobi weengcibi okanye ingcali xa ujonga ityhubhu eqinileyo yelitye njengoko imithwalo yobunzima iya kufuneka ithathelwe ingqalelo ngononophelo.
Xa uqala ukuqwalasela ibhafu yokuntywila yaseJapan, lumka uqiniseke ukuba umenzi wakho webhafu usebenzisa izinto eziza kuguga kakuhle kwaye zibambe amanzi ngokwenyani. Iipaneli zomthi zigcina amanzi ngokulula kunamaplanga. Ukongeza kwi-Hinoki, i-Western Red Cedar kunye ne-Teak yimithi emikhulu yokuntywila iibhafu. Zonke zihlala zomelele kwaye kulula ukuzinyamekela.
Iibhafu zokuma simahla-ziyafumaneka kubathengisi abakwi-Intanethi kwaye uninzi lweevenkile ezinkulu zehardware kwezi ntsuku. Isenokungabi nzulu njengebhafu yokuthambisa yesiko okanye eyenziwe ngokwesiqhelo, kodwa ziyafikeleleka kwaye ziyahambelana. Oku kwenza ukuba zifikeleleke ngakumbi kumntu ophakathi kwaye kube lula ukuphinda zingene kwigumbi lokuhlambela elilinganayo. Ziyafana nesitayile, nangona kunjalo, zinzulu kwaye zinamacala athe tye uphawu lwetyhubhu yokuntywila yaseJapan.
Ukuntywila kweJapan ngesiTubhu ngeShower
Le ndlu yokuhlambela yemarble entle inebhafu yokuntywila yaseJapan kunye neshawa. Isheyi enkulu yokungena ekhokelela kwindawo yokuhlambela ephezulu kunye nomoya opholileyo. (Ndwendwela eli phepha ngaphezulu Izimvo zoyilo lwangaphakathi lwaseJapan )
Esi sitayile sithobekileyo saseJapan sokuthambisa ibhafu kunye neshawa sinokwakhiwa kweenkuni okulula ngombhobho wokuhlamba onokubonakala.
Ukuntywila kwitabhu yaseJapan ngaphandle
Ibhafu yokuhlamba yaseJapan engaphandle yeyona ndlela ifanelekileyo yokubuyisela impilo kunye nokuphila ngokwasemoyeni. Ukukhumbuza ngemithombo eshushu yendalo, ityhubhu yangaphandle ikuvumela ukuba uphumle intamo ephezulu emanzini afuthayo kwaye uyeke uxinzelelo lwakho lunyibilike.
Le bhafu ijikeleze ngaphandle ibotshelelwe ngamakhonkco ensimbi afana nomgqomo wewayini. Ishelufu encinci inikezela ukufikelela kwibhakethi yokuhlamba.
Ukucoca iibhafu ezinje akunakho ukuxhotyiswa ngeejets. Ngokwabo bahlamba isimbo saseJapan omnye uhlamba umzimba ngaphandle kwebhafu esebenzisa ibhakethi okanye ishawa. Nje ukuba ugqibile ungangena ebhafini esetyenziselwa ukuntywila kuphela.
izimvo zesipho kubazali bomyeni nomyeni
Isiko lokuhlamba ihlathi laseJapan luhlobo lwenyango apho umntu ahlamba khona phambi kwemithi ukunceda ukunciphisa uxinzelelo lwegazi kunye nokubetha kwentliziyo kunye nokuphucula indlela oziva ngayo. Ukongeza ityhubhu yokuntywila yangaphandle yaseJapan ekhayeni lakho yindlela entle yokwandisa indawo yakho yokuhlala yangaphandle kwaye uphucule ukonwaba kwakho.
AmaJapan afunxa iiTubhu zamagumbi okuhlambela amancinci
Inokuba yinto engathethekiyo ukufaka ibhafu ngaphakathi kwindawo encinci yokuhlambela efuna ukuqwalaselwa ngokupheleleyo kwendawo. Nangona kunjalo, iibhabhu zokuntywila zaseJapan zibalulekile ekuguqukeni xa uthatha isigqibo ngebhafu efanelekileyo ngokufanelekileyo kwigumbi lakho lokuhlambela elincinci. Oko kuthethiweyo, kule mihla kukho ubuninzi bezinto ezingekho mgangathweni kunye noyilo lwesiko onokukhetha kulo. Uluvo lweJapan lokuthambisa iibhafu zeendawo zokuhlambela ezincinci kukubandakanya umsebenzisi kukhuseleko oluphezulu ngaphakathi kwindawo encinci.
Okokuqala, kubalulekile ukuba uqwalasele ukuba ngubani oza kusebenzisa ibhafu yokuntywila yaseJapan. Kwaye oku kuyakushiya ngombono wobungakanani besixubha sokuntywila eJapan ngokubhekisele ekusebenzeni kwabasebenzisi baso.
Njengomthetho wesithupha, kubaluleke kakhulu ukuzama kwaye uqinisekise ukuba uya kukhululeka ngaphakathi kwebhafu yaseJapan phambi kokuthenga.
Kwimeko apho unamathela kwigumbi lokuhlambela elimxinwa kakhulu, unokuba ngokwemvelo utyekele ekujongeni iibhafu zaseJapan ezixineneyo. Njengesikhokelo ngokubanzi, nayiphi na ityhubhu yokuntywila yaseJapan engaphantsi kweesentimitha ezingama-32 ububanzi ayifanelekanga ukuba ibhafu yokuphumla, yokuthambisa. Ngazo zonke iindlela, yiya kwibhafu yokuntywila yaseJapan yee-intshi ezingama-32 zobubanzi eziya kukunika intuthuzelo kunye nokuguquguquka.
Ngokombutho weSizwe weKhitshi kunye neBhafu, i-intshi ezingama-60 ubude ngokuchasene nobubanzi be-30-32 i-intshi bobona ubuncinci bobukhulu bemigodi yokuntywila yaseJapan. [Kubalulekile ukukhumbula ukuba le yimilinganiselo yangaphandle]
Ukuba ityhubhu yakho yokuntywila yaseJapan uyilo oluyilwe sisikwere, unokufuna ukuqaphela ibhafu yekona eyilelwe ngokukodwa izithuba ezixineneyo. Ezi zi-stylish kunye ne-spa, ezaba indawo ngokufanelekileyo. Imiphanda yekona iyafumaneka kwintengiso njengoko yakhiwe kwiibhafu, okanye ii-insets ekufuneka zibekwe kwindawo eyahlukileyo ukongeza ukuya kwi-intshi ezimbalwa kwindawo yakho yasimahla yokuhlambela.
Iityhubhu zokuhamba ngesinye isisombululo esiluncedo kwiindawo ezixineneyo. Iityhubhu zokuhamba ngenyawo zithatha indawo yokubonakalayo encinci kwaye zivele njengoko zidada ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela. Ezi tubs ziguquka kakhulu kodwa zibiza. Iibhafu zesitayile saseAsia zezabantu abathanda iibhafu ezinde kunye nezolisayo.
Iibhafu zesitayile saseAsia ziyaziwa zisebenzisa amanzi amancinci akhokelela kushicilelo lweenyawo ezincinci. I-Ofuro sisithethe esidumileyo saseJapan setyhubhu enzulu ehamba nesitulo esivumela abo baqubha ukuba bangene emanzini ashushu. Kule mihla, imiphanda yokuthambisa yaseJapan iza nezinto ezahlukeneyo zentsimbi, iinkuni, i-ceramic, ikhonkrithi kwi-acrylic. Ezi zinokuqwalaselwa njengokuma simahla, okanye njengee-insets eqongeni.
(1) yingca ukusuka kwiFlickr (iLayisensi ye-Creative Commons)
(Mbini) BradBeattie isuka kwiWikipedia (iLayisensi yeCreative Commons)
I-Aquatica True Ofuro Mini Ezimeleyo kwiLitye laseJapan Ukuntywila uBha… $ 6600.00 umthengisi ogqibelele UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IAriyeli PW1685959CW1 IAriyeli PW1685959… $ 2590.00 umthengisi ogqibelele (14) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
iimaski zobuso ezintle kumtshato
Ukulungiselela ilizwe liphela
ukucoca iringi yedayimani yeplatinam
ikhitshi kwikhabhinethi yetsheri
Isinxibo esisemthethweni somsitho womtshato